I-China Zonke zikwi-PC enye, Chukumisa zonke kwi-PC enye, i-PC yePaneli yokuChukumisa i-Industrial, i-LCD Monitor, ii-Mini PC zeManufacure kunye nabaxhasi - Shenzhen VisionVision Technology Co. LTD
Iphaneli yokuthinta imizi mveliso
chukumisa yonke i-PC inone
zonke kwi-pc enye
I-intshi ye-S350x23.8 yonke-in-nye
I-S250X ikhompyutha ye-AIO iyonke
I-23.8 intshi ye-HD epheleleyo kwi-pc enye
I-21.5 intshi ye-HD epheleleyo kwi-pc enye
I-Shenzhen Thinkview Technology Co, Ltd.
I-Shenzhen ThinkView Technology Co, Ltd esekwe ngo-2008, ijolise ekuphuhliseni nasekwenzeni iimveliso zekhompyuter ezinje nge-All in one PC, Touch AIO PC, Gaming Monitor, Touch Monitor, Gaming AIO kunye nebhokisi encinci yePC. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo, umzekelo kwi-i-cafe, kwezemfundo, eofisini, ehotele, iinkqubo zeCASINO, izixhobo zorhwebo kunye nonyango kunye nokuzonwabisa kwasekhaya. ixesha elinenkuthalo, inkathalo yeenkcukacha kunye nokusoloko sifuna ukungabinasiphene kwiimveliso, ngenxa yoko sinokuhlangabezana kakuhle kakhulu neemfuno zabathengi kunye nolindelo lwethu. Kwaye iimveliso zethu zivunyiwe ngazo zonke iintlobo zokuqinisekiswa komgangatho njengeCCC, iEC kunye neCCC. â € rofUbungcali nokuzinikelaâ €, kwaye â € QualityUmgangatho oPhezulu kunye nokuSebenza â € sisaci sethu ngalo lonke ixesha.Sineminyaka sizibophelele ukubeka iliso nakwiimveliso zePC iR & D kunye nezinto ezintsha. Ukuze sihlangabezane neyantlukwano yabathengi bethu kunye neemfuno ezizezakho, sihlala sigcina ubudlelwane obusondeleyo kunye notshintshiselwano lobuchwephesha ngonikezelo lwethu oluphezulu, njengababoneleli bephaneli yeLCD yeSAMSUNG, AUO kunye neBOE, umthengisi weCPU weIntel. Okwangoku, sisebenza kakuhle kunye neearhente zethu ze-ThinkView kunye nezinye iimveliso ezinkulu umzekelo, i-ViewSonic, i-ZTE, iGreatWall, iHedy, iHaier.
23.8 intshi yonke kwidesktop enye
21.5 intshi yonke kwidesktop enye
I-PC ye-AIO ye-19.5 intshi
Zeziphi izibonelelo zokuchukumisa zonke-in-nye?
Ukuchukumisa umatshini woku-in-one kudibanisa ngokwenene ukuchukumisa kunye nolawulo. Ukuchukumisa umatshini woku-in-one uphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwabantu.
Zithini izibonelelo kunye nexabiso leenkqubo zekhompyuter yefu?
Olona loncedo lubaluleke kakhulu kwinkqubo yedesktop yelifu kukuba ukusebenza kwayo phakathi kokhuseleko lwedatha kunye nokugcinwa kwemfihlo kubaluleke kakhulu. Ukhuseleko kunye nozinzo zii-coefficients eziphezulu kakhulu.
Isikhokelo somsebenzisi seekhompyuter zonke-in-nye
Yonke into-inye ikakhulu yifom entsha yekhompyuter edibanisa umphathi kunye nomboniso. Ixabiso leekhompyuter zonke ngaphakathi kwintengiso nalo lahlukile, kodwa amava ngamaxabiso asezantsi anqabile,
Khawufane ucinge uMbono ukuxelela iimpawu zokuchukumisa zonke-in-nye zezicelo kwiivenkile ezinkulu
Xa sihlala sisiya kwiindawo ezinkulu zokuthenga, siza kubona bonke oomatshini bokuchukumisa bonke besetyenziswa kwiindawo zentengiso. Abathengi abatsala umdla mall ngokukhawuleza ngobuhle nangefashoni.
Ngaba unokuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Ixabiso lethu kunye nenkonzo ngokuqinisekileyo ziya kukwanelisa ~
 Kumgangatho we-4, Ukwakhiwa kwe-A, iTangtou yeNdawo yoShishino yesithathu, iSitalato iShiyan, isiThili saseBaoan, eShenzhen
Ilungelo lokushicilela © 2020 Shenzhen ThinkView Technology Co, Ltd. Onke amalungelo agciniwe.